Ukuchazwa kokulala lapho ulunywa yilwane: ngesandla, umlenze, isithende noma izingubo.
Yini ongayilindela uma ulunywa yinduna ephusheni?
Okushiwo iphupho lapho ubona khona udoti.
Njengokuphila kwangempela, ephusheni, i-rat idala imizwelo emincane nemibuthano enhle, ikakhulukazi uma ikuphikisa. Ngokuyinhloko, ukuphupha izincwadi ziqinile ngoba kuyisignali engafaneleki nokubi. Ukuchazwa kwale phupho kuyashintsha futhi kuye ngokuthi iyiphi indawo isilwane esikutshisayo.
Yini le ndoda ephupha ngayo?
Ngokuvamile, isilwane siphupha ukukuxwayisa ngokukhaphela noma ukukhashelwa ngabantu abaseduze. Mhlawumbe, ama-intrigue ahlangene nawe futhi udinga ukunaka kakhulu imvelo yakho futhi, uma kungenzeka, ugweme ukuthintana nabantu abangathandeki. Uma umbala we-rodent ubumhlophe, ngokushesha uzothola ukusekelwa okungalindelekile nokusizwa komuntu owaziyo.
Kwezinye izincwadi zephupho, le ncazelo elandelayo inikezwa: uma i-rat enkulu isiphelile, bese ulindela izindaba ezijabulisayo noma umcimbi; Uma ubona indlela ikati elibambe ngayo, lithembisa impilo enhle.
Isilinganiso esiphundu sibonisa ukuthi awunelisekile ngento ethile kuwe - isibonelo, ngezici zobunjwa. Udinga ukukhokha ngokwengeziwe umuntu wakho bese uzama ukuthola ukuvumelana kwangaphakathi.
Ukubulala noma ukubamba le ndoda ephusheni, empeleni ungabanqoba ngokuphumelelayo izitha, futhi ukhululeke ekubonweni kwezwe okungalungile nemicabango.
Ibhuku lephupho lesifazane lichaza ukuthi lesi silwane singakwazi ukubhekana nokungavumelani nokuxabana.
USonnik Shuvalova unikeza incazelo elandelayo: ngoba empilweni yangempela isilwane kubhekwa njengesilwane esingcolile, okuletha ukulahleka kuphela, khona-ke ephusheni kusho nokulahlekelwa okuthile. Kungenzeka ukuthi inhlanhla, impilo noma inhlanhla ebhizinisini izokushiya okwesikhashana.
Uma usanda kuzwa ephusheni, njenge-rat squeals, ngaphandle kokubona ngisho nesilwane ngokwawo, kusho ukuthi omunye umshayeli uzama ukukulimaza.
Kusho ukuthini uma udoti uluma ephusheni?
Abahumushi bavumelana ngokubheka ukuthi udoti uluma ephusheni aluhambisani kahle. Iphupho elinjalo lingaba isibonakaliso esihle kuleso simo kuphela - uma sikubeka esithendeni. Lokhu kusho ukuthi ngesikhathi esifushane uzobe uthuthukise kakhulu isimo sakho sezezimali.
Enye yezinguquko umlutha wokuluma okuphuphayo okulandelayo: iphupho eliphindaphindiwe ngokuphindaphindiwe libonisa ukuthi umphuphi ulandela unembeza wakhe. Mhlawumbe wenza isenzo esingenakufanelekela, okwaholela eqinisweni lokuthi ngenxa yakhe, abantu ababaziyo babesesimweni esingathandeki. Ngokushesha nje lapho ekwazi ukuxazulula le nkinga empilweni yangempela, elulaza iphutha - lobuhlungu buzoyeka ukuhlukumeza.
Uma i-rat ikuhlaba ngesandla, zilungele izinkinga zezezimali - qaphela izimali ezibonakala sengathi zinenzuzo ekuqaleni.
Ukulunywa kwalesi sifo somlenze kubangela ukungezwani emndenini ngenxa yesenzo sokulahla komuntu olele noma, njengokukhetha, ukuphikisana nabangane bakhe. Zama ukugwema izimo zokungqubuzana, futhi, ngaphezu kwalokho, ukuba uqale njengabaqalayo.
Isibonakaliso esingathandeki sithathwa futhi uma isilonda sisuka - lokhu kuyisibonakaliso sokuthi esikhathini esizayo esiseduze omunye umuntu ovela ezihlotsheni zakho angagula kakhulu. Indlela ongakhetha ngayo yokuhumusha leli phupho ukuthi kufanele ulungise ukucindezeleka, okuyoba nzima kakhulu ukuphuma kuwo.
Uma i-rat ikuhlaba ephusheni izingubo, khona-ke lokhu kuyisibonakaliso esihle - kungekudala uzokwazi ukubona iphupho noma umgomo, oye wahamba isikhathi eside kakhulu.
Futhi nakuba ukuhumusha okuyinhloko akulungile, akufanele uthukuthele. ukuhlaziya kahle iphupho lakho, awukwazi ukuveza ngokucacile imicimbi yesikhathi esizayo, kodwa futhi uthathe izinyathelo eziphumelelayo zokulungiselela kusengaphambili izinkinga noma ngisho nokuzivimbela.
Yakha indlu: yini ongayilindela kulephupho?
Kungani uphupha amaphupho angenangqondo?
Kusho ukuthini ukukhuluma ephusheni efonini?
Indoda iyashintsha ephusheni, yini okufanele ukuyicabanga?
Yimaphi amasonto eviki enza amaphupho agcwaliseke?
Kungani siphupha ngezihlahla?
I-Carp in foil
A sedative for izinzwa abesifazane
Indlela yokubeka izinto ngokuhlelekile ekamelweni
Inkinga yobuhlobo bomndeni 1 unyaka
U-Ksenia Borodina waletha u-Olga Buzov izinyembezi ngamazwi mayelana nesahlukaniso, ividiyo
Ukulungiselela izingane enkulisa
Amathiphu ewusizo ewusizo kakhulu
Okuthinta isifuba esifanele
Ukugcina kahle izicathulo zesikhumba
UMakSim wayefuna ama-ruble ayizinkulungwane ezingu-200 avela kwi-Express-Gazeta
Izinqubo zokuhlola ezikoleni: izinzuzo nezingozi
Ungabhubhisa kanjani imicikilisho yokulingisa ngaphansi kwamehlo ekhaya?
Restaurant chic ekhaya noma ukulungisa isaladi nge inkukhu kanye iklabishi Pekinese
Ukulungisa nokuthuthukiswa kwekhaya lakho ozithandayo
Ukunakekelwa kwezinwele ezifanele ebusika
I-Pearl - izakhiwo zemilingo